Yusuf Garaad: Su'aal Askari Berbera - Taxanaha 89 - 90 - Qaybta Shanaad
Su'aal Askari Berbera - Taxanaha 89 - 90 - Qaybta Shanaad
Ka sokow xiriirka mas'uuliyiinta iyo shacabka oo aan kala shaqeeyo Madaxa Xafiiska, howsha iigu weyn ee aan Berbera u tegey waa in aan fasiro sababta ay Ururka Bisha Cas ee Soomaaliyeed iyo Guddiga Caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas ay u yimaadeen Berbera iyo Howlaha ay qabanayaan.
Xeryaha ciidanka badiyaa galab ama habeen ayaan tagaa. Subaxa waxaana culeyska saaraa nooc kasta oo ay leeyihiin shaqaalaha Bisha Cas iyo Laanqeyrta Cas - hadday noqon lahaayeen kalkaaliyayaal caafimaad, dhallinyaro khibrad qaadasho u jooga, shaqaalaha xafiisyada, kuwa gaadiidka iyo farsama yaqaannada, kuwa nadaafadda iyo nooc kasta oo kale sida ilaalada.
Ciidammadu inta badan si wanaagsan ayay xeryahooda iigu soo dhoweeyaan. Marka aan casharkeyga jeediyana su’aalo iyo jawaabo ama ra’yi ayaan inta badan is weydaarsannaa. Marmar anigaa weydiiya su'aalo dood dhalin kara si aan u qiyaaso fahamkooda iyo sida ay u arkaan Qaanuunka Dagaalka. Tusaale ahaan waxaan weydiiyaa sideed u aragtaa nin kula dagaallamaya haddii aad dhaawac ku qabato in aanad dilin ee weliba aad oggolaato in la daaweeyo?
Waxaan u sheegay mas’uuliyadda Bisha iyo Laanqeyrta Cas in ay ku kooban tahay daryeel aadminnimo oo samafal ah. In ay dooneyso in dhinacyada dagaallamaya ay dhexdhexaad ka ahaato si ay ugu adeegi karto rayidka, dhaawaca iyo maxbuuska dagaal. In aanay mas'uuliyaddeeda ka mid ahayn siyaasad, dhexdhexaadin iyo heshiisiin kooxo dagaallamaya toona.
Askariga oo ahaa nin da' yar intaa kuma harin. Su’aashiisii xigtay ayaa iiga sii yaab badneyd. Wuxuu igu yiri in aad dhaawaca labada dhinacba daweysaan waxaa ay sii daba dheereyneysaa dagaalka. Qof dhaawac uga maqnaan lahaa goobta dagaalka ayaad soo daweyneysaan oo ku soo noqonaya faltanka dhib hor leh ayuuna geysan karaa. Markaa waxaa habboon in aad ka shaqeysaan sidii aan isu af garan lahayn oo aan u heshiin lahayn. Haddii adnaan taa awoodin in aad naga dhex baxdaan ayaa la qaatay.
Aniga oo weli ku jira xulidda macallimiin Dugsi Sare oo aan Muqdisho iyo Berbera labadaba ka raadinayo ayaa qof howsha dhinac uga jiray uu iskuu isu xilqaamay. Isaga oo aan i wargelin ayuu arrinka hor dhigay mas’uul sare oo Wasaaradda Waxbarashada ah. Jawaabtu waxay noqotay "Suurta-gal ma aha".
Markaas uun ayaan billaabay in aan dib isugu noqdo oo aan u qaatay in ay dhici karto in aan faraha kula jiro howlo aanan fahamsaneyn. 'Waa macquul' oo keliya in aanay ku filleyn in woqooyiga ra'yi loo rogo waxqabad xataa haddii uu yahay mid dadka iyo dalka u dan ah.
Posted by Yusuf Garaad at 01:36:00